Isikhathi sezulu sezulu saseScottish Highlands 10
AmaSulumane aseScottish Highland Day 10 Day Forecast
Isimo Sezulu saseScottish Highlands
Ibhalwe on 10 October 2009 . Kuthunyelwe ku intaba imininingwane
I-Highlands yaseScottland iyaziwa ngoba isimo sayo sezulu sashintsha phakathi nezinkathi zonyaka, nakuba isimo sezulu eScotland asifani kakhulu neNgilandi, eScotland sinamafu kakhulu.
Amahora ajwayelekile okushisa kwelanga aphezulu kakhulu ngoMeyi noJuni futhi okungenani ngoDisemba noJanuwari. Ngenxa yezinga eliphakeme lezinsuku zasebusika lifushane kakhulu kodwa lihlawulwa ngamahora angu-5 kuphela obumnyama obuseduze nezinsuku ezinde zasehlobo. Imvula yinye into ebalulekile yeSimo sezulu saseScott.
Isiqondiso sezintandokazi zemimoya esivela eningizimu-ntshonalanga kanye nemimoya eqinile kwenzeka kaningi futhi kunamandla kunayo yonke eNtshonalanga Isles nasogwini olusenyakatho-ntshonalanga ngoJanuwari futhi
NgoFebhuwari kube izinyanga ezibandayo ezinenani eliphakathi kwe-5 kuya ku-7 ° C lapho izinyanga zasehlobo ziphakathi kwama-19 Degrees centigrade.
Ukushisa okushiwo ngonyaka ku-Ben Nevis (i-1344m) yi-0.3C ne-Snowfall kwenzeka ezinsukwini ezingaphansi kwezinsuku ze-20 eduze nentshonalanga ogwini ukuya ezingaphezu kwezinsuku ze-100 kwi-Cairngorm Mountains ikakhulukazi ezinyangeni zikaDisemba kuya ku-Mashi.
Ukubuyekezwa kwamakhasimende we-1
5 ngaphandle kwezinkanyezi ze-5
5 okuvotelwe ukuvota.
Ukubuyekezwa kulindele ukuvunywa.
Ngesikhathi seScottish Highland isimo sezulu singashintsha ngaso sonke isikhathi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka njalo siletha izingubo zokushintsha ukufika kwemvula noma ukukhanya.
1 of 1 abantu bathole ukubuyekezwa okulandelayo kuyasiza
Igama lomlobi *
I-imeyili yombhali *
Isifinyezo sesilinganiso *
isibuyekezo sakho *
Okuningi ongabelana ngazo? (Okokuzithandela)
Engeza isithombe noma ifayela
Izivakashi Eziphakeme ze-Highlands
Khetha Indawo AberdeenshireAngusI-ArgyllI-BanffshireUkukhohlisaInvernessKincardineshireMorayI-NairnshireOrkneyI-Outer HebridesPerthshireI-Ross ne-CromartyShetlandSutherland
Izithombe ze-Clouds Weather Clouds Weather
Umhlahlandlela Wokwaziswa Ngezivakashi Zase-Fort William
Umhlahlandlela we-National Museum of Scotland (Edinburgh)
Umhlahlandlela Wokwaziswa Wokuvakasha We-Aberdeenshire
I-Wick Heritage Centre Tourist Guide
Umhlahlandlela Wokuhamba Ezikoleni zaseScotland
I-Glen Moray Distillery
Indawo yokuhlala yaseGlencoe Skiing
Umhlahlandlela Wokwaziswa Wabavakashi We-Glen Urquhart
Khombisa # 5 10 15 20 25 30 50 100 Zonke